ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်သွားသလို ကိုရီးယားအစားအစာတွေနဲ့မွေ့လျော်နိုင်မယ့် အာဂျီးမား – FoodiesNavi
ကိုရီးယားနိုင်ငံရောက်သွားသလို ကိုရီးယားအစားအစာတွေနဲ့မွေ့လျော်နိုင်မယ့် အာဂျီးမား
By yin sandi On March 29, 2018 0
ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲရေစီးကြောင်းနဲ့အတူ မြန်မာလူမျိုးတွေကြားထဲကို လွင့်မျောလိုက်ပါလာတာကတော့ ကိုရီးယားအစားအစာတွေပါပဲ။ ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေကြည့်ရင်း ကိုယ်ချစ်ခင်အားပေးတဲ့သရုပ်ဆောင်တွေ စားနေကြတဲ့ ကိုရီးယားရိုးရာအစားအစာတွေကိုမြင်တွေ့တိုင်း သွားရည်ကျဖူးလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် ? ? အက်မင်လည်း ကိုရီးယားကားခရေဇီဖြစ်သလို ? အစားအသောက်သရဲလည်းဖြစ်တော့ ? ကိုရီးယားအစားအစာကောင်းတဲ့ဆိုင်တွေ သွားစားကြည့်ရင်း ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကို ရှယ်ခံတွင်းတွေ့သွားလို့ ဘဝတူအစားတစ်လိုင်းတွေကို ဖောက်သည်ချပေးချင်ပါတယ်။ ? ?
ဆိုင်နာမည်ကတော့ Ahjumma (အာဂျီးမား) ၊ တည်နေရာကတော့ နာမည်ကြီးစားသောက်ဆိုင်တွေ ပလုံစီနေတဲ့ “နဝဒေးလမ်း”မှာပါ။ အထက(၁)ဒဂုံကျောင်း မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘက်အခြမ်းမှာပါ။ နွေရာသီလိုပူလောင်အိုက်စက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ဝင်သွားလိုက်တာနဲ့အေးစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့ သီချင်းသံမြူးမြူးလေးနားဆင်ရတော့ ဝင်ဝင်ချင်းစိတ်တော့နည်းနည်းလန်းဆန်းသွားတယ်။ စားပွဲကုလားထိုင်တွေနဲ့ ခင်းကျင်းထားတာရှိသလို ဘုရားစင်ရှေ့အမြင့်လေးမှာ လေးထောင့်စားပွဲလေးတွေနဲ့ ခင်းကျင်းထားတာတွေရှိပေမယ့် အက်မင်ကတော့ ခြေထောက်ကျဉ်တတ်လို့ ကုလားထိုင်တွေမှာပဲထိုင်ဖြစ်တယ်။
မီးရောင်ဝါထိန်ထိန်လေးတွေက အရမ်းကြီးလင်းမနေဘဲ Classic ဆန်ဆန်လေးဖြစ်နေပြီး အုတ်နံရံလေးတွေပေါ်မှာလည်း ချယ်ရီပင်ရိုးတံပုံလေးတွေ ၊ ပန်းချီကားလေးတွေရေးဆွဲထားပြီး ကိုရီးယားမင်းသမီးပုံလေးတွေနဲ့ အလှပန်းအိုးလေးတွေပါ ဆင်မြန်းထားတော့ ရိုမက်တစ်ဆန်ဆန်လေးရယ်။ ဆိုင်ထဲဝင်ပြီး Menu စာအုပ်ကြည့်လိုက်မှ ကိုရီးယားအစားအစာတွေတင်မကသေးဘူးရော ? ? ထိုင်းအစားအစာနဲ့ တရုတ်အစားအစာတွေပါရနိုင်သေးတယ်တဲ့။ အက်မင်ကတော့ ကိုရီးယားအစားအစာတွေပိုကြိုက်လို့ ကိုရီးယားအစားအစာတွေနဲ့ ထိုင်းစာထဲကတစ်မျိုးမှာဖြစ်တယ်။ ထမင်းစားချိန်ဖြစ်လို့လားမသိ ဝိုင်းပြည့်နီးပါးလူတွေတော်တော်များတော့ မှာရင်တော့ကြာမယ်ထင်တယ်လို့စိတ်ပူမိသေးတယ်။ ကိုယ်ထင်တာနဲ့တော့ လုံးဝတလွဲပဲ ? သိပ်တောင်မစောင့်လိုက်ရဘူး။ တစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုလာချတော့တာပဲ ? ?
အာဂျီးမားမှာ အက်မင်အခိုက်ဆုံးကတော့ ချိစ်တော့ပိုကီပဲ။ တော့ပိုကီအရည်ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်လေးထဲမှာ စီးစီးပိုင်ပိုင်တော့ပိုကီချောင်းလေးတွေကို အရည်လေးတွေနဲ့ရောလှိမ့်ပြီး ချိစ်အနှစ်လေးတွေနဲ့တို့တို့ပြီးစားရတာ တော်တော်ကြီးကိုဖိုင်းတယ်။ တော့ပိုကီအရည်ကျဲမနေတာကလည်း တော့ပိုကီချောင်းလေးတွေနဲ့ ကြက်အူချောင်းလေးတွေကို အရသာစိမ့်ဝင်မှုအားကောင်းအောင် နှပ်ပေးထားသလိုပဲ။ အီစိမ့်မနေဘဲ တော့ပိုကီအရသာဆိမ့်ဆိမ့်လေးကို ချိစ်အရသာဆိမ့်ဆိမ့်လေးပါထပ်ပေါင်းထားတော့ ဝါးစားလိုက်တိုင်း အဆိမ့်အရသာတွေ လျှာပေါ်ယိုဖိတ်ကျလာသလိုပဲ။
ကျောက်အိုးပူထမင်းသုပ်ကတော့ ကြက် ၊ ဝက် ၊ ပင်လယ်စာတွေနဲ့ရနိုင်ပေမယ့် အက်မင်ကတော့ ပင်လယ်စာလေးပဲ မှာစားဖြစ်တယ်။ ပုံလေးထဲကအတိုင်းကြက်ဥလေးကို အလယ်မှာဖောက်ထည့်ပေးထားပါတယ်။ သတိထားရမှာက လာချချပေးချင်း မွှေပေးဖို့ပါပဲ။ မဟုတ်ရင်ကျောက်အိုးပူရဲ့အရှိန်ကြောင့် ကြက်ဥတူးသွားတတ်ပါတယ်။ အရသာကတော့ စားနေကျထမင်းသုပ်တွေနဲ့ လုံးဝကိုကွဲထွက်နေတယ်။ Bibimbab sauce လေးနဲ့ ပဲငံပြာရည်လေးတွဲချထားပေးထားလို့ စိတ်ကြိုက်အရသာပေါင်းစပ်ပြီး သုံးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ပင်လယ်စာ ၊ အသီးအရွက်တွေနဲ့ ရောသုပ်ထားပေမယ့် ကျောက်အိုးပူကြောင့်ထင်တယ်။ ထမင်းကြော်ပုံစံလေးဖြစ်သွားပြီး စားရတာ ပူနွေးနွေးအရသာလေးနဲ့ တော်တော်ခံတွင်းတွေ့တယ်။
ဝက်သားဆလပ်ကတော့ ဝက်သားတစ်ဖတ်ချင်းစီက စိုဖတ်ဖတ်လေးနဲ့ချိုမြနူးအိနေတာပဲ။ အသားတစ်ဖတ်ဝါးလိုက်တိုင်းမှာ အရသာဓာတ်တွေ လျှာထဲကိုစိမ့်စိမ့်ဝင်သွားသလိုပဲ ။ လေးလေးပင်ပင်လေးနဲ့ အသားတစ်မျှင်ချင်းစီမှာကို ကြက်သွန်ဖြူနံ့လေးမွှေးပြီး စားလို့တော်တော်ကောင်းတယ်။
အက်မင်ကတော့ ဆလပ်ရွက်လေးထဲမှာ ဝက်သားဖတ်လေးတွေနဲ့အတူ ဂင်ချီ ၊ ပဲပင်ပေါက်ချဉ် ၊ ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေရောထုပ်ပြီး အာခံတွင်းနဲ့အပြည့်တစ်လုပ်တည်း စားပစ်လိုက်တာ အရသာရှိလိုက်ပုံများကတော့ ရေးနေရင်းကိုပြန်စားချင်လာတယ် ? တကယ် ။ ဆလပ်ရွက်နှစ်ရွက်လောက်ထိစားနေရင်း အလယ်ကတစ်ရွက်ကတော့ သိပ်မသန့်ဘူးရယ်။ ရေဆေးထားတာသိပ်မစင်တာထင်တယ်။ ကိုယ်လည်းတစ်ရွက်တစ်လေဆိုတော့ ပြောမနေတော့ဘူး ။ ဆလပ်ရွက်အသစ်တွေပဲထပ်တောင်းလိုက်တယ်။
ပန်ကိတ်ကတော့ မချိုမချဉ်မစပ်လွန်းပဲ အစပ်အဟပ်တည့်တည့်လေးနဲ့ ရှတတလေးရယ်။ ဂင်ချီနဲ့ပင်လယ်စာ နှစ်မျိုးရနိုင်ပေမယ့် အက်မင်ကတော့ ပင်လယ်စာပဲရွေးဖြစ်တယ်။ အသုံးပြုထားတဲ့ဂျုံသားကတော့ စားကြည့်လိုက်တာနဲ့ရှယ်မှန်းသိသာတယ်။ ဝါးရတာနူးနူးညံ့ညံ့လေးနဲ့ ဂျုံသားလေးတွေကြားထဲမှာ ပင်လယ်စာလေးတွေထည့်ညှပ်ထားတော့ အိစက်စက်လေးနဲ့ဝါးရတာ တော်တော်ဂွတ်တယ်။ ပန်ကိတ်နဲ့တွဲထားတဲ့ Sauce လေးကနည်းနည်းချိုတော့ တို့စားရတာသိပ်မလိုက်သလိုပဲ။ ကိုယ်ကတော့ ပန်ကိတ်ကြီးပဲစားရတာပိုကြိုက်တယ်။
သံပြားပူဘူဂိုဂီကတော့ ကြက် ၊ ဝက် ၊ အမဲရနိုင်ပေမယ့် ကြက်သားကိုစမ်းမှာဖြစ်တယ်။ သစ်သားပြားဗန်းလေးပေါ်မှာ သံပြားပန်းကန်လေးတင်ပြီး အဲ့ဒီထဲမှာ ပဲကြာဆံ ၊ ဂေါ်ဖီ ၊ မုန်လာဥနီတို့ကို အောက်ဘက်မှာခင်းထားပြီး အပေါ်ကနေ ကြက်သားဖတ်လေးတွေတင်ထားတာပါ။ နဂိုကတည်းက ကြက်သားသိပ်မကြိုက်လို့လားမသိ ။ စားရတာပေါ့ရွှတ်ရွှတ်လေးနဲ့ သိပ်ခံတွင်းမတွေ့လှဘူး။
ထိုင်းစာကိုတော့ ပုဇွန်အကျက်သုပ်တစ်ပွဲပဲ မှာဖြစ်တယ်။ အရသာထူးခြားလွန်းလို့ မှာထားတာနည်းသွားတယ်ပြောရမယ် ? ? ပုဇွန်အကျက်သုပ်လေးကို ထိုင်းရိုးရာဟင်းအနှစ်လေးတွေနဲ့ ချိုချဉ်ငံစပ်လေးသုပ်ထားတာ တော်တော်လေးအစပ်အဟပ်တည့်လှတယ်။ ခံတွင်းကိုရှင်းသွားတာပဲ။ ကြက်သွန်နီနဲ့ ပူစီနံပါထည့်သုပ်ထားတော့ ပူရှိန်းရှိန်းမွှေးမွှေးလေးနဲ့ ပုဇွန်ရဲ့လတ်ဆတ်ချိုမြမှုတွေပျောက်မသွားတဲ့အပြင် ချိုချဉ်ငံစပ်အရသာဓာတ်လေးတွေပါ လွှမ်းခြုံထားတော့ လုံးဝကိုရှယ်ပဲ။ အက်မင်ကတော့ နောက်တစ်ခါထပ်သွားစားဖြစ်ရင် ထိုင်းစာ ၊ တရုတ်စာတွေကိုပါ မပါမဖြစ်တွဲစားမယ်လို့ စဉ်းစားထားတယ် ? ?
သစ်သီးဖျော်ရည်နဲ့ coffee, Tea , တွေရနိုင်ပေမယ့် အရသာကတော့ပုံမှန်ပါပဲ သိပ်မထူးခြားဘူး။ Ready-made တွေတော့ပိုများတယ်။
စျေးနှုန်းတွေကတော့ပုံမှန် အသင့်တင့်ပါပဲ။ စားရတဲ့အရသာနဲ့ ပေးရတဲ့တန်ဖိုးကိုက်ညီတယ်ပြောရမယ်။ Menu လေးတွေနဲ့ စျေးနှုန်းလေးတွေတွဲရေးပေးထားတော့ ကိုယ်တွေလို အတွက်အချက်သမားတွေပိုအဆင်ပြေတယ်။ လိပ်စာအပြည့်အစုံကတော့ အမှတ်(၂၃၈) ၊ နဝဒေးလမ်း ၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ မနက်(၁၀)နာရီကနေ ည(၉)နာရီအထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ahjumma kitchen အကြောင်းဝင်ကြည့်ချင်ရင်လည်း အောက်က Ahjumma Facebook ကိုထောက်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်။
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အကောင်းဆုံး စီချွမ်းစတိုင်ဟင်းလျာတွေရရှိနိုင်မယ့် Uncle MC